Zvinyorwa na Jenn Lisak Golding
NeChishanu, Nyamavhuvhu 14, 2020 NeChishanu, Nyamavhuvhu 14, 2020 Jenn Lisak Golding
Dambudziko rebhizinesi iri kana chinangwa chekuita chiri kukushungurudza nguva pfupi yadarika? Mikana ndiyo mhinduro yaro hinges pane tekinoroji. Sekuda pane yako nguva, bhajeti uye hukama hwebhizinesi zvinokwira, wako wega mukana wekugara pamberi pevakwikwidzi pasina kurasikirwa nepfungwa dzako kuri kuburikidza neotomation. Kuchinja muhunhu hwevatengi kunoda otomatiki Iwe unotoziva otomatiki haina-brainer maererano nehunyanzvi: mashoma zvikanganiso, mutengo, kunonoka, uye mabasa emawoko. Sezvakakosha, ndizvo izvo vatengi vava kutarisira.
Sezvo akawanda uye akawanda mablog uye mawebhusaiti achiburitswa zuva nezuva, zvinowanzo netsa kuba kuba kwemifananidzo iwe yawakatenga kana yawakagadzirira yako wega kana nyanzvi kushandisa. TinEye, inodzosera kumashure injini yekutsvaga, inopa vashandisi kugona kutsvaga yakatarwa url yezvifananidzo, kwaunogona kuona kuti kangani mifananidzo yakawanikwa pawebhu uye kwayakashandiswa. Kana iwe wakatenga mufananidzo wesitoko kubva kunowanikwa senge yedu
'Ino ndiyo mwaka wekushambadzira pazororo, uye yedu email yekusimbisa software inotsigira NeverBounce yakagadzira yekupedzisira yezororo email email gwara rekuona kwako kunakidzwa. Dhata reNational Retail Federation rinoramba richiratidza kuti mari iri kukwira gore rino, kunyanya online uye inotungamirwa nemadhijitari. Email kushambadzira inonyanya kutamba chikamu chakakura, uye vatengesi vanofanirwa kugara pamusoro pekuchengetedza zvinyorwa zvavo zvakachena uye zvitsva kuchengetedza mukurumbira wavo wekutumira uye kugona. Vamwe
Mafomu Ekutungamira Akafa?
Svondo, October 23, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Jenn Lisak Golding
Mhinduro pfupi? Hongu. Zvirinani mune zvetsika pfungwa, uye ne "zvetsika" isu tinoreva kuda ruzivo rwevashanyi usati wapa kukosha, kana kushandisa stale, static zvemukati sekurudziro. Ngatisimudzirei iro rori kune mamwe mamiriro: Mubasa redu kubatsira vatengi kuwedzera kwavo online kutendeuka, isu takacherekedza rakakosha, risingaperi kudonha muwebhu vashanyi vachizadza echinyakare lead mafomu. Pane chikonzero chakanaka cheizvozvo. Maitiro emutengi ari kuchinja, kunyanya nekuti tekinoroji, ruzivo